कसरी कमाउने अनलाइनबाट | Abhash Adhikari
2 months ago abhashadhikari Comments0Comment
घरमै बसीबसी बिना लगानी पैसा कमाउने रहर कसलाई पो नहोला र ? बेरोजगारीको चरम मारमा परिरहेको हाम्रो समाजमा त यो इच्छा नहुने झन बिरलै भेटिएलान ।
ठुलो लगानी बिना नै नेपालमै पनि २० हजार देखि २ लाखभन्दा बढि मासिक कमाइ गर्नेको कमि हाम्रै नेपालमा पनि छैन । र घरमै बसेर एकदमै थोरै लगानी अथवा भनौं बिना लगानी मनग्य आम्दानी गर्ने माध्यम बनिरहेको छ अनलाइन । आज हामी कसरी अनलाइनका माध्यमबाट आम्दानी गर्ने भन्ने विषयमा नै चर्चा गर्नेछौं ।
१. क्यप्चा सल्भर यो अनलाइन बाट पैसा कमाउने एकदमै सजिलो तरिका हो । यसमा तपाईंले तस्विरमा देखाइएको क्याप्चालाई पढेर जस्ताको तस्तै टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ । तपाईंले जति धेरै क्याप्चा टाइप गर्नुहुन्छ, त्यति नै धेरै तपाईंको कमाइ हुन्छ । लगभग एक हजारवटा क्याप्चा टाइप गर्दा तपाईंले दुई देखि तीन डलरसम्म प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ।
२. पीटीसी / जीपीटी साइटहरु
पेड टु क्लिक (पीटीसी)का लागि उपलब्ध विभिन्न फ्रि साइटहरुको मद्दतबाट तपाईंले सजिलै आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ । यसमा तपाईंले वेबसाइटमा रहेको विज्ञापन क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र १० देखि ३० सेकेण्ड सम्म त्यो विज्ञापन हेर्नु आवश्यक हुन्छ । तपाईंले हेर्ने प्रत्येक विज्ञापनबाट तपाईंले कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ ।
गेट पेड टु (जीपीटी)साइटका माध्यमबाट भिडिओ हेरेर, त्यहाँ भएका खेलहरु खेलेर अथवा त्यहाँ उपलब्ध अन्य सेवाहरु प्रयोग गरेर तपाईंली आर्थिक आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ ।
३. एडसेन्स र अन्य एड नेटवर्क
तपाईं धैर्यवान हुनुहुन्छ भने मात्र यो तरिका तपाईंलाइ उपयुक्त हुनसक्छ । माथि चर्चा गरिएका तरिका जस्तै यो सहज छैन भने पहिलोपटक आम्दानी गर्न पनि तपाईंले लामो समय प्रतिक्ष्या गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गुगल एडसेन्सका लागि तपाईंसंग वेबसाइट हुन आवश्यक छ । वेबसाइटमा तपाईंले नियमित रुपमा पाठक (भिजिटर)हरुको उपस्थिति गराउनु पर्दछ र मात्र तपाईंले त्यहाँ प्राप्त विज्ञापन(एड) अनुसार आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ । तपाईंको वेबसाइटमा आउने भिजिटर अनुसार तपाईंले यो माध्यमबाट महिनाकै लाखौँ रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ ।
फ्रिल्यान्सरका रुपमा तपाईंले अनलाइनमा नै रहेर विभिन्न साना तथा ठुलो कम्पनीका कामहरु अस्थायी रुपमा गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईंले आफुमा रहेको क्षमताअनुसार त्यहाँबाट काम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहि अनुसार तपाईंको आम्दानी रहन्छ । तपाईंलाई प्राविधिक कामका अतिरिक्त अप्राविधिक कामहरु पनि फ्रिल्यान्सिङमा उपलब्ध हुन्छन् ।
इल्यान्स , अपवर्क जस्ता बिभिन्न वेबसाइटहरु फ्रिल्यान्सिङका लागि विश्व प्रसिद्द रहेका छन् ।
माथि उल्लेखित कार्यका साथै तपाईंले भर्चुअल एसिस्टेन्टका रुपमा अरुको प्रुफरिडिंग, मार्केटिंग, रिसर्च, वेब डेभलपमेन्ट र डिजाइनजस्ता काम गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसैगरि विभिन्न लेख, रचनाहरू लेखेर कन्टेन्ट राइटर बनि प्रशस्त आम्दानी गर्नेको पनि ठुलो जामात छ ।
राम्रो भिडिओ खिच्न र बनाउन दख्खल राख्नेका लागि केहि सर्त पुरा गरेर यूटुबबाट समेत अहिले भिडिओ चलेको अनुसार राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ ।
Earn Online, SEO in Nepal, SEO Tips earn money online in nepal, freelancin, freelancing in nepal, gpt sites, ptc sites, ptc sites in nepal, SEO	Post navigation
NEXTयसरी भेट्नुस हराएको फोन
PREVIOUS Overcoming These Challenges Will Make You More Successful